Izindaba - Ngabe usasebenzisa amaswidi okotini ukwelapha amanxeba? IHuai'an ZTE Pharmaceutical "Iveze Izinga Lakho Eliyinyumba Lokotini Olushubile Lakho"
Njengento ebalulekile yasendlini, ama-swabs kakotini alula kakhulu ukuwusebenzisa, noma ngabe iyithuluzi lobuciko lokulungisa imininingwane ngesikhathi sokwenza izimonyo, noma ithuluzi elisizayo lokukhipha amagciwane nokusula amafutha lapho kwelashwa isilonda. Ikakhulukazi lapho ubhekene nezilonda noma izinkinga zesikhumba se-eczema, ukuze ugweme ukutheleleka kwesibili, ama-swabs ekotini ngokuvamile asetshenziselwa ukusula umuthi. Eqinisweni, akuwona wonke ama-swabs okotini afanele ukwelashwa amanxeba. Uma ama-swabs okotini engakhethwanga kahle, hhayi kuphela izifo zesekondari ezingenakugwenywa, kepha futhi noMay angadala ukuthi izilonda zibe zimbi kakhulu
Abahlinzeki basekhaya bemishini yezokwelapha yobuchwepheshe kanye nemikhiqizo yokubulala amagciwane bathe akuyona yonke imichilo yekotini engasetshenziselwa izinhloso zokwelashwa. Ama-swabs wezokwelapha kakotini kufanele abhalwe ukuthi "ayinyumba" futhi "abulawe inzalo" ngaphambi kokuthi asetshenziselwe ukubulala amagciwane enxebeni. Yize i-swab kakotini incane, ubuchwepheshe bayo bezinto ezibonakalayo nezokulungisa nakho kuhle noma kubi. Kungenxa yalokhu kuqonda kwesayensi ukuthi i-Huai'an ZTE Medical cotton swabs ingaba ngumkhiqizo oholayo wezinyumba zikakotini oyinyumba.
Ukwelashwa kokuvala inzalo kochwepheshe: inzalo iqinisekisa ukuphepha okwengeziwe kwama-workshops namafektri we-Huai'an ZTE Pharmaceutical kanye nawo wonke amafektri akhiwe ngokuhambisana nezindinganiso zikazwelonke zedivayisi yezokwelapha i-GMP ukuqinisekisa ukuthi wonke umkhiqizo owenziwe uhlangabezana nezindinganiso zezokwelapha. IHuai'an ZTE ukotini wezokwelapha swabs nawo ahlukile. Ama-swabs okotini ezokwelapha e-Huai'an ZTE aphathwa ngobuchwepheshe benzalo ye-ethylene oxide esetshenziswa kakhulu kumadivayisi wezokwelapha ukuqinisekisa ukuthi agcinwa njenge-aseptic ngaphambi kokusetshenziswa. Zenziwa ngokuhambisana ngokuqinile nezidingo zobuchwepheshe ezisungulwe ngokubhaliswa kwama-swabs okotini wezokwelapha. Ukugwema ukutheleleka kwesilonda sesibili.
Ama-swabs amaningi kakotini njengamanje asemakethe awabhalwa ngokuthi "ayinyumba", ngakho-ke lolu hlobo lwekotini alulungele ukwelashwa kwamanxeba, futhi ukusetshenziswa kwasendlini kufanele kukhethwe ngokucophelela.
Ukotini omunca ngokwezokwelapha: uthambile, ukhululekile futhi unamanzi amaningi
Ngokucabanga ukuthi amaswidi kakotini angasetshenziswa ukwelapha amanxeba empilweni yomndeni, ama-swabs okotini we-Huai'an ZTE Pharmaceutical awadinga ngokuqinile ngokuya ngamazinga ezokwelapha kusukela ekuqaleni, hhayi kuphela ukusebenzisa ubuchwepheshe bokuvala inzalo ye-ethylene oxide enqubweni yokukhiqiza, kepha futhi ukukhethwa kwezinto zokwakha. Khetha ukotini omunca ezokwelapha njengezinto ezisemqoka zokwengeza ukunethezeka kokusetshenziswa. Ukotini omunca ezokwelapha ubizwa nangokuthi "ukotini owenziwe imithi". Ngemuva kwenqubo yokunciphisa, indawo ayinamafutha futhi ine-hydrophilicity engcono. Kuyinto elula uma usula umuthi owuketshezi noma ubulala amagciwane ezilondeni. Ngaphezu kwalokho, ukotini omunca kwezokwelapha uthambile futhi uzacile, hhayi umbala omhlophe kuphela, kodwa futhi uthambile. Ikhanda likakotini elinwebekayo linganakekela kangcono isikhumba esibucayi.
Izindwangu zikakotini zisetshenziswa kabanzi, futhi abantu abaningi bavame ukukushaya indiva ukuphepha kwabo. IHuai'an ZTE Pharmaceutical ikhumbuza wonke umuntu: Uma kusetshenziswa ukotini wasendlini ekwelapheni isilonda, kufanele ukhethe ama-swabs oyinyumba oyinyumba, futhi udinga ukunaka ukuwafaka esitokisini nsuku zonke ukuze ugweme ukungcoliswa kwama-cotton swabs.
IHuaian Zhongxing Pharmaceutical Technology Co., Ltd. izibophezele ekwakheni indawo yokuhlinzeka ngobuchwepheshe emikhakheni yezokwelapha neyezempilo ngemikhiqizo eyiqiniso namanani aphansi, futhi ihlonipheke kakhulu ngokunikela ngamandla ethu empilweni yesintu. Ngesisekelo sokwaziwa ngabathengi Esikhathini esizayo, sizophinde sithathe isibopho sokuhola imboni ekuthuthukisweni okuphezulu, futhi ngokuhlanganyela sakhe uchungechunge oluphelele futhi oluholayo lokukhiqiza imboni ukuze sinikele ekufezekiseni kusenesikhathi ukunakekelwa kwezempilo okubandakanya.
Isikhathi Iposi: Jan-19-2021
Isihlengikazi Pad, Alahlwayo Medical Face Imaski, Imaski Yama-antiviral, Imaski ephefumula, Ukotini Wezokwelapha, Inzalo Ukotini Swab,